Xog Aad U Culus:Damaul-jadiid oo 6 Milyan&Balan qaad kusoo xero gelisay Ugaaska Xawaadle iyo maamul dhisidii… | Kismaayo24 News Agency
Xog Aad U Culus:Damaul-jadiid oo 6 Milyan&Balan qaad kusoo xero gelisay Ugaaska Xawaadle iyo maamul dhisidii…
Monday September 5, 2016 - 5:58 under Somali News by Tifaftiraha K24
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya in ugaaska guud ee beesha xawaadle kusoo wajahanyahay magaalada Jowhar ee lafilaayo in ka qabsoomo shirka losameynaayo mamaulka Hiiraan iyo shabeellaha dhexe.
Xogtaan ayaa kasoo xiganay shaqsiyaad katirsan wasaarada arimaha gudaha oo aan magacooda ka gaabsaney sabababo amaan ayaa noo sheegay in ugaaska guud ee beeshaas lafilaayo in halkaas soo gaaro kadib markii wadahadalo gar wadeen ka ahayeen xildhibaano beeshaas kasoo jeedo iyo gabre ayna sababtay in ugaaska lakeyno magaalada jowhar.
Imaatinka ugaas ayaa kadanbeyse kadib markii lasheegay in aduun lacageed oo garaayo 6 milyan oo dollar iyo in kasoo mid noqon doona liiska ugaasyada soo xuli doono xildhibaanada cusub oo haatan kamid ahayn 135 oday dhaqameed.
Arintaan ayaa faa iido weyn u ah kooxda madaxweynaha soomaaliya madaama ku hami weynyihiin in xildhibaanada halkaas kasoo geli donaan sidii u hana lahayeen madaama oo ugu danbeyn saxiixaayo madaxweynaha labadaas gobol yeelato.
Arintaan ayaa guul weyn u noqon doonta kooxda madaxweynaha soomaaliya inkastoo maanta dibu dhac kuyimid shir lashaaciyay in oo kafurmaayay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe.